होली विशेष - साप्ताहिक
साप्ताहिक संवाददाता , चैत्र ६, २०७५
होलीमा हल्का मदहोस् भएर रङसँग खेल्नुको मज्जा बेग्लै हुन्छ । गाँजाजन्य पदार्थको सेवन प्रतिबन्धित भएपछि होलीमा रंगिँदै मदहोस हुनेहरूका लागि मदिरा एकमात्र विकल्प भएको छ । मदिराको नशामा लठ्टिएर होली खेल्नुभन्दा हल्का रम–रम भएको अवस्थामा खेल्नुको मज्जा अर्कै हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. सविना भट्टराई (छालारोग विशेषज्ञ), चैत्र ६, २०७५
अहिले प्रविधिको विकाससँगै केमिकल युक्त रंगको प्रयोग बढ्दो छ । केही मेहनत गर्ने हो भने प्राकृतिक वस्तुहरू प्रयोग गरेर तिनको रंगले पनि रमाइलो होली खेल्न सकिन्छ । आधुनिक रंगको विकास नहुँदा होलीमा प्राकृतिक रंग नै प्रयोग गरिन्थ्यो । यस्ता रंगले शरीरमा कुनै असर नगर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
मोदनाथ पौडेल (न्युट्रिसियन), चैत्र ६, २०७५
मिठाइ मात्र खानुभन्दा माछा, मासु अनि फलफूल पनि आफ्नो खानामा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले सन्तुलित आहार प्राप्त हुनुका साथै यो समयमा लाग्ने रुघाखोकीबाट जोगिन सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. रणजित झा, चैत्र ६, २०७५
होली खेल्ने त्रममा स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । खासगरी छाला, आँखा, कान, केश आदिको सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
राजधानीमा शिवरात्रीपछि बाटोमा हिड्ने महिला देख्नासाथ घरको छतमा लुकेर पानी भरिएको लोला हान्ने चलन थियो । पुरा पढ्नुहोस्
१३–१४ वर्षको छोरा पागलजस्तै बहुलाउन थालेपछि मेरा आमा–बुवा पनि आत्तिनु भएछ । डरले धामी–झाँक्री बोलाउने निर्णय गर्नु भएछ । छिमेकीहरूले ‘तिम्रो छोराले घोट्टा खाएको छ’ भनेपछि आमाले अमिलो कागती र दही ख्वाउनु भएछ । त्यसले पनि काम गरेनछ । म त्यो होलीको दिनदेखि करिब तीन दिनसम्म अचेत भएर सुतेको सुत्यै भएँ । पुरा पढ्नुहोस्